အိမ်ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေ ၂၀၂၁ မှာ ဘယ်လိုအိမ်မျိုးကို ရွေးချယ်ကြမလဲ?
In 2020, we witnessed new benchmark on home buying. High net-worth home seekers are demanding for greater outdoor space, wellness facilities, low density community and neighbourhood with good security are now the new luxury benchmarks.
၂၀၂၀ မှာ ခမ်းနားပြီး ခေတ်မှီတဲ့အိမ် ဝယ်သူတွေရဲ့ စံသတ်မှတ်ချက်တွေကို ကြည့်လိုက်တော့ outdoor space ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းရှိတာ၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ဝန်ဆောင်မှုကောင်းတွေရှိတာ၊ လူဦးရေသိပ်သည်းမှုနည်းပါးတာ၊ နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လုံခြုံရေးအပြည့်ရှိတာ စတဲ့အချက်တွေကို စဉ်းစားလာကြတာတွေ့ရတယ်။
As they spend more time at home, both for work and leisure, they are looking for open layout design and concept, that can accommodate modern interiors and informal transitions, from room to room, and floor to floor.
လူတွေက အလုပ်ကို အိမ်ကနေပဲ လုပ်လာရတယ်၊ အိမ်မှာပဲနေရတဲ့အချိန်တွေ ပိုများလာတဲ့အတွက် ကြောင့် ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းရှိတဲ့ အဖွင့်ပုံစံ open layout ကို ပိုကြိုက်လာကြပါတယ်။ ပြီးမှ အခန်းတွေ၊ အထပ်တွေရဲ့ အိမ်တွင်းအပြင်အဆင်ကို ခေတ်မှီပုံစံပြင်ဆင်ကြပါတယ်။
Rising demand for ready to move-in homes
The affluent are willing to pay more for model home or showrooms as these offeraturnkey arrangement that allows them to move in at ease.
ဆောက်လုပ်ပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင်တဲ့ အိမ်များ
တချို့အိမ်ဝယ်မယ့်သူတွေက showroom လုပ်ထားတဲ့အိမ်တွေကိုပဲ ဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်တာကို ကြိုက်နှစ်သက်တတ်ကြတယ်။ အိမ်ထောင်ပရိဘောဂအားလုံး ပြင်ဆင်ထားပြီးသားအခြေအနေဆိုတော့ တခါတည်းပြောင်းလာပြီး နေလို့ရတဲ့အတွက် အရမ်းအဆင်ပြေလို့ ကြိုက်ကြပါတယ်။
Living space to supportalifestyle choice
They are looking for outdoor space that can magically and quickly transform into indoor/outdoor living. Soadining room that opens up to an external patio, garden or pool are quickly becoming the preferred lifestyle choice.
အိမ်တွင်းနေရာတွေကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်လူနေမှုပုံစံအလိုက် ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်း
အိမ်ဝယ်မယ့်သူတွေက အိမ်အပြင်ဖက်မှာ နေရာကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း outdoor space ရှိပြီး မိမိလူနေမှုပုံစံနဲ့ ကိုက်ညီအောင် သုံးလို့ရနိုင်တာကို သဘောကျကြပါတယ်။ ထမင်းစားခန်းကနေ ခြံထဲကို မြင်နေရတာ၊ ခြံဝင်းကျယ်ရှိတာ၊ ရေကူးကန်ပါတာတွေကို အခုနောက်ပိုင်းရွေးချယ်လာကြပါတယ်။
The affluent is also looking for multipurpose room they can transform or convert intoasecond living room,aplayroom,agym or evenahome cinema.
အခန်းကို ကိုယ့်စိတ်ကူးအလိုက် ပုံစံမျိုးစုံပြောင်းသုံးနိုင်တာကိုလဲ ဒီနှစ်တွေမှာ အကြိုက်တွေ့လာကြ တယ်။ မိသားစုနားနေဖို့အခန်းကို ကလေးကစားဖို့အခန်းအဖြစ်ပြောင်းပြီးသုံးနိုင်သလို gym ခန်း၊ မိသားစုရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့အခန်း အဖြစ်လဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Wellness amenities & facilities
Demand for community garden, outdoor playground and even alfresco dining is also on the rise as people are spending more time at home with the new norm. They are looking at eco friendly water treatment plants or communities that placeahigh value on saving the environment.
ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ လူနေမှုဘဝအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ
လူတွေက အိမ်ထဲမှာပဲ အနေများလာတော့ New Normal မှာ ပန်းခြံ၊ ကလေးကစားကွင်း၊ မိသားစုလွတ် လွတ်လပ်လပ်စားသောက်လို့ရတဲ့ outdoor area စတာတွေပါတာကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်လာကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျန်းမာရေးအတွက် ရေသန့်စင်စနစ်ရှိတာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်တာစတဲ့ အချက်တွေကိုလဲ အိမ်ဝယ်တဲ့အခါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားလာကြတယ်။
More people are keeping pets asaresponse to improving their mental well-being. Homes that are pet friendly will be the upcoming trend.
တချို့လူတွေက အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေနဲ့ အဖော်ပြုပြီးနေကြတဲ့အတွက် သူတို့လေးတွေအတွက် အဆင်ပြေမယ့်နေရာဖြစ်ဖို့ကိုလဲ စဉ်းစားလာကြတယ်။
At Pun Hlaing Estate, there areawide variety of home options, from condo to townhouses to villas that can address the needs of the modern home-seekers. If you would like to know what are your options and home loan availability at Pun Hlaing, do contact us at Enquiry: +95 (9) 777229449 Email: punhlaingsales@yomaland.com
ပန်းလှိုင်အိမ်ရာမှာ ကွန်ဒိုကနေ townhouse၊ လုံးချင်းအိမ်ထိမျိုးစုံရှိလို့ အိမ်ဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်နှင့် အိမ်ရာချေးငွေအတွက်သိရှိလိုပါက 09 777229449 ကို ဆက်သွယ်နိုင်သလို punhlaingsales@yomaland.com ကိုလည်း email ပို့စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။ Facebook page: https://www.facebook.com/punhlaingestate